Arduino chirongwa chekudzidzisa | Mahara emahara
Arduino chirongwa chekudzidzisa
Arduino Iyo ingangove imwe yeanobudirira kwazvo emahara software uye mapurojekiti ehurdware kana mapuratifomu uye iyo yakave nekukanganisa kwakanyanya muiyo DIY nyika. Iyo nharaunda yakagadzira ese akavhurwa sosi software yekugadzirisa iwo ma microcontroller mabhodhi, pamwe neakasiyana mabhodhi ehurdware zvakare akasununguka kushanda nawo. Zvese zvakapihwa marezinesi pasi peGNU GPL rezinesi kuitira kuti kuwanda kwezvokuwedzera-uye zvigadzirwa zvavo zvinogona kugadzirwa.
Muchokwadi, ivo vakamutsa iyo yese indasitiri yemagetsi neakawanda zvinhu, ngowani kana nhoo Izvo zvaunogona kuwedzera kugona kweako Arduino bhodhi kupfuura ayo ekutanga mashandiro ayo aanoshandisa seyakajairwa. Mazhinji makiti akaunzwawo ekutanga kana kuita chaiwo mapurojekiti, akadai semakiti emarobhoti, makiti emapurojekiti ane simba rezuva, matangi ekutanga.
1 Ndeapi mhando yemahwendefa aripo?
2 Chii chandinofanira kutanga?
3 Arduino chirongwa chedzidziso:
3.1 Chii chinonzi kurodha pasi faira?
3.2 Dhawunorodha Mahara eBook uye wedzera-ons:
Ndeapi mhando yemahwendefa aripo?
Pane akasiyana emahofisi eArduino mabhodhi, kunyangwe kutanga ini ndinokurudzira kushandisa Arduino UNO, inova iyo yandinoshandisa sehwaro hwedzidziso. Mahwendefa akasiyana siyana anonyanya kumira ndeaya:
Arduino UNO Zvak: ndiyo yakachinjika uye yakashandiswa ndiro yezvose, iyo yakakurudzirwa kutanga nayo. Iyo ine 328Mhz ATmega16 microcontroller, 2KB yeSRAM uye 32KB ye flash, 14 dijitari I / O pini uye zvitanhatu zvinopinda.
Arduino Yakakodzera: Iyo ine AT91SAM3X8E microcontroller ine 84 Mhz, 96KB yeSRAM, uye 512 KB yemwenje, saka iwe unozogona kurekodha mapurogiramu akaomarara emapurojekiti makuru. Saizvozvo, iwe unowana makumi mashanu neshanu yedhijitari I / O kubatana uye gumi nembiri zvigadzirwa (54 zvibodzwa zveanalog.
Arduino Mega: 2560Mhz ATmega16 microcontroller, 8KB yeSRAM, 256KB ye flash, 54 digital I / O mapini uye gumi nematanhatu ekuisa. Mune mamwe mazwi, ichave iri yepakati modhi pakati peAnofanirwa neUNO, yemapurojekiti ekumomarara epakati.
Arduino Lily pad: Diki uye rakatenderera ndiro inochinjika kune ako e-machira mapurojekiti, ndiko kuti, inopfekedzwa iwe yaunogona kuisa pahembe. Inoshandisika.
ArduinoMicro: Iri bhodhi diki kwazvo rine microcontroller iro rinogona kubatsira kana nzvimbo iri chinhu chakakosha uye iwe uchida bhodhi inotora nzvimbo diki yekuisa mukati mediki nzvimbo. Iko kune Pro vhezheni yacho ine yakawedzerwa kugona. Inosanganisira 32Mhz ATmega4U16 microcontroller, uye makumi maviri maI / O mapini auchazofanira kusungurudza.
ArduinoNano: iro rakatoita diki bhodhi kupfuura iyo Micro, asi iine akafanana maficha uye mutengo, iine ATmega328 microcontroller.
Arduino Esplora: Inodhura zvishoma pane mazhinji apfuura, yakavakirwa panaLeonardo wepakutanga, aine masimba akafanana neUNO uye yaive ndiro yekutanga yakaonekwa. Asi dhizaini yayo yakavandudzwa, yakaderedzwa uye inosiyana mukuti mamwe mabhatani, mini joystick, uye sensors zvakabatanidzwa zvakananga pabhodhi. Naizvozvo, zvinonakidza zvemitambo yemitambo.
Iwe zvakare uchawana mahwendefa asina kufanira, Yakagadzirwa nenharaunda kana nemamwe makambani. Hunhu hwayo hunogona kunge hwakafanana, uye kunyange hunowirirana neArduino maererano nehurongwa kana zvemagetsi level, asi isu tatozvisiya izvo seimwe sarudzo yesarudzo yako. Ini handikurudzire kuti utange nemabhodhi aya kubva mune chero nzira, nekuti panogona kunge paine zvinhu zvisingawirirane uye hausi kuzowana rubatsiro rwakawanda. Zvakare, mamwe acho akanyatso kujeka marobhoti, madhiraoni, nezvimwe.
Kune rimwe divi, iwe une iyo zvemagetsi zvishongedzo izvo zvinopa yako Arduino bhodhi nemamwe masimba, akadai seWiFi kubatanidza, Bluetooth, madhiraivha ekudzora mota, nezvimwe. Mamwe edziviriro anozivikanwa ndeaya:
Nhoo Wifi: kuwedzera kubatanidza kweWiFi uye kugona kubatanidza projekiti yako kuInternet kuitisa kure.
Nhoo GSM: ye mobile data kubatanidza.
Ethernet Shield: wired kubatana kune network.
Shield Proto: inokutendera kuti ushandise boardboard yezvigadzirwa zvako.
Uye zvakawanda zvimwe, senge zviyero, keyboards, ...
Pfungwa, ye tanga, Handifunge kuti ungangofarira rudzi urwu rwechinhu, kunyangwe iwe uchazoida gare gare.
Chii chandinofanira kutanga?
Kutanga, Ini ndinokupa zano kuti uwane zvinhu zvinotevera:
Arduino Kit Kutanga: iyo yakakwana Starter kit ine ndiro Arduino UNO, bhuku rakazara kwazvo uye kuwanda kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvemagetsi zvekushanda nazvo (maresitor, ma capacitor, LED skrini, zvinoratidzira, bhodhi rechingwa, maUSS, tambo, ma diode, ma transistors, buzzers, mota uye servomotors, madhiraivha, nezvimwewo).
Kana iwe ukasarudza kutenga imwe yemahwendefa ataurwa pamusoro, gara uchifunga kuti uchafanirwa kutora iyo zvemagetsi zvinhu zvakakodzera pabasa rega rega uri wega muzvitoro zvine hunyanzvi… Zvinogoneka zvakare kuti kana wangoshandisa kitambo chekutanga, unofarira kutenga zvimwe zvinhu kuti urambe uchiwedzera mapurojekiti ako kana kuita zvinhu zvinopfuura izvo zvinobvumidzwa nekitsi ino.
Beyond the physical, zvingave zvakare zvinonakidza kana iwe uine zvakakwana software:
Arduino IDE: unogona download yemapuratifomu akasiyana zvachose mahara. Mune iyo PDF dzidziso ini ndinotsanangura maitiro ekuiisa pane yega yega yekushandisa system uye kuti inoshanda sei.
Ardublock: ndeimwe plugin muJava for akawanda mapuratifomu anogona zvakare kuve downloaded mahara. Iyo inokutendera iwe kuti ushande graphical, ndiko kuti, kushandisa mabhureki akafanana nemapuzzle zvidimbu kunyora ako mapurogiramu pasina kushandisa programming mutauro. Zvese izvi zvinotsanangurwawo muPDF.
Fritzing: chirongwa chinokutendera iwe kuti uite mimhanzi kana prototypes emacircuit ako usati waaunganidza. Inonakidza kwazvo uye inosanganisira kuwanda kwezvinhu pakati pemaraibhurari emidziyo. Dhawunirodha pano.
Nezvo, iwe unenge uine zvinopfuura zvakakwana kutanga…
Arduino chirongwa chedzidziso:
Kunyangwe chikuva chave kushanda kwemakore, panogona kuve paine vazhinji vechidiki kana kwete vechidiki vechidiki vanotiverenga izvozvi uye vanoda kujoina nharaunda huru yevagadziri varipo vachigadzira mapurojekiti anoenderana neArduino panguva ino. Saka, kana iwe uchida kutanga kudzidza kuronga kubva pakutanga uye nhanho nhanho, ini ndinokupa iwe yemahara ebook pane Arduino chirongwa. Nayo iwe unodzidza zvese zvaunoda kuti utange kuvaka ako ekutanga magadzirirwo ...
Chii chinonzi kurodha pasi faira?
Mukati Dhawunirodha ZIP iwe unowana mafaera akati wandei ekushanda nawo:
eBook nedzidziso Arduino IDE uye Ardublock kuronga muPDF standard yekugona kuishandisa paPC yako.
eBook yakafanana neiyo yapfuura, asi yehukuru hudiki uye lightweight kushandisa kubva kune ako nhare mbozha.
Dhawunirodha zvinongedzo ne mapurogiramu zvakafanira.
Dhairekita ine zvakasiyana sketch sosi mafaira kuti iwe unogona kuyedza semienzaniso kana kugadzirisa kuti udzidze. Iko kune ese ari maviri kodhi yeArduino IDE pamwe nezvimwe zveArdublock uye kunyangwe mamwe macode ekushanda pamwe neRaspberry Pi.
Dhawunorodha Mahara eBook uye wedzera-ons:
Tanga kurodha pasi pano:
Ndinovimba zvinokubatsira uye iwe unotanga kuve mugadziri na mapurojekiti ako ekutanga. Iwe unogona kusiya zvirevo nezvako zvekutanga dhizaini uye nekugovana zvisikwa zvako nesu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Arduino chirongwa chekudzidzisa
Kwaziso Masikati Akanaka:
Iwe waifanirwa kugadzira TESTER iyo inotora maviri maitiro eCapacitor uye kuramba kunoenderana pasi C = 470Mfx50V, R = 330k 1 / 4W, izvi zvakabatana nekuisa uye kuburitsa 3.5 AUDIO Jack
Kuburikidza neMubvunzo 3.5
mubvunzo mu arduino chingaitwe chinhu chinoyera uye nekubuditsa hunhu,
Mario Piñones c. akadaro
Ndiri kutanga uye ini ndinotarisira kuwana mibairo yakanaka
Pindura Mario Piñones c.
EBOOK yako yeArduino haishande
Ndakangoedza uye zvinondiitira. Ichokwadi kuti ad inotanga kubuda.
Asi kechipiri paunodzvanya chinongedzo chainorodha.
Arduino + relay module uye dombo & roll: kusanganisa AC / DC
Gadzira yako pini pini kamera